८८ दिनमा १ वर्ष, ५८ दिनमा १ दिन हुने अनौठो बुध ग्रह, जसको उपग्रह नै छैन | Ratopati
personचन्द्र खाकी exploreकाठमाडौं access_timeफागुन ६, २०७५ chat_bubble_outline0
बुधको नाम कसरी रह्यो ?
बुध ग्रहलाई अंग्रेजी भाषामा Mercury भनिन्छ । बुध ग्रहको यो नामाकरण रोमनहरुले गरेका हुन् । प्राचीनकालमा रोमनहरुले आकाशमा सात वटा चम्किला पिण्डहरुलाई पहिचान गरेका थिए । उनीहरुले पहिचान गरेका ती सातवटा पिण्डहरुमध्ये सूर्य, चन्द्रमा, बुधलगायतका पाँचवटा ग्रहहरु थिए । यसक्रममा उनीहरुले के देखे भने, सूर्यलाई सबैभन्दा चाँडो परिक्रमा गर्ने ग्रह बुध हो । त्यसैले उनीहरुले यस ग्रहको नाम आफ्ना सबैभन्दा महत्वपूर्ण देवता Mercury को नाममा राखिदिए । रोमन धार्मिक मान्यताअनुसार Mercury सूचनाको र यात्राको देवता हो । किम्बदन्तीअनुसार, मक्र्युरी देवताको पखेटा र स्याण्डलको मद्दतले उड्ने गर्छ ।
यता पूर्वेली समाज विशेष गरेर हिन्दू मान्यतामा चाहिँ यस ग्रहको नाम हिन्दू देवता बुधको नामको आधारमा राखियो । हिन्दू मान्यताअनुसार बुध चन्द्रमाका छोरा हुन् । चिनिया, कोरियन, जापानिज र भियतनामीहरु यस ग्रहलाई पानी तारा (Water Star) भनी मान्छन् ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, सौर्यमण्डलका ग्रहहरु गोलाकार कक्षमा होइन, अण्डाकार कक्षमा घुम्ने गर्छ । यसको अर्थ के हो भने सूर्यबाट ग्रहहरुको दूरी मात्र हैन, ग्रहबाट अर्को ग्रहकै दूरी पनि भिन्नभिन्न हुने गर्छ । बुधको कक्षको गोलाकार लम्बाई ३६०,०००,००० किलोमिटर छ ।
सूर्यको सबैभन्दा नजिकको नातेदार ग्रह हो बुध । तर पनि यो हाम्रो हिसाबले निक्कै टाढा नै पर्छ । सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकमा बुध ग्रह २८.६ मिलियन माइल (४६ मिलियन किलोमिटर) टाढा पर्छ भने सबैभन्दा टाढा चाहिँ ४३.४ मिलियन माइल (६९.८ मिलियन किलोमिटर) दूरीमा पर्छ ।
बुधमा वायुमण्डल छ तर त्यो अत्यन्तै पातलो छ । सूर्यको बाहिरी सतहबाट आउने तत्वहरुबाट बन्ने सौर्य हावाले निरन्तर रुपमा बुधको सतहमा प्रहार गरिरहेको हुन्छ । त्यही प्रहारको कारण बुधको सतहमा हुने अणुहरुको निरन्तर विस्फोटनबाट त्यहाँको वायुमण्डल बनेको छ । सूर्यको अति नजिक रहेको कारण बुधको सतह अत्यन्तै तातो हुन्छ । त्यही तातोपनाले गर्दा त्यहाँ निर्माण भएको अणुको वायुमण्डल चाँडै उडेर अन्तरीक्षमा विलाउने गर्छ । यसरी बुधमा पृथ्वी र शुक्र ग्रहमा जस्तो स्थायी रुपमा रहिरहने वायुमण्डल छैन, त्यहाँ त निरन्तर रुपमा फेरिइरहने वा नयाँ नयाँ पैदा भइरहने खालको वायुमण्डल छ ।
बुधको वायुमण्डलमा पोटासियम, सोडियम, अणुको रुपमा रहेकोअक्सिजन, आर्गोन, हिलियम, नाइट्रोजन, कार्बोनडाइअक्साइड, पानी र हाइड्रोन पाइन्छ ।
सूर्यको सबैभन्दा नजिकको ग्रह नै बुध हो । यो सूर्यको अति नजिक भएकोले आफ्नो अक्षमा निक्कै ढिलो घुम्ने गर्छ । फेरि यसको वायुमण्डल पनि निक्कै पातलो छ, जसले गर्दा यसले तातोलाई आफ्नो कब्जामा राखिराख्न सक्दैन । यही कारण नै बुध ग्रहको तापक्रममा निक्कै विभिन्नता छन् । यस अर्थमा बुधको तापक्रम रातको समयमा २७९ फरेनहाइटसम्म हुन्छ भने दिनको समयमा त्यहाँको तापक्रम ८१० फरेनहाइटसम्म हुन्छ । यो तापक्रम भनेको सिसा (lead) लाई पगाल्नको लागि पर्याप्त हुन्छ ।
पातलो वायुमण्डल भएको कारण त्यहाँको वातावरणमा आँधी, बाँदल, हावा र पानीहरु हुँदैनन् ।
हाम्रो सौर्यमण्डलमा सबैभन्दा छोटो कक्ष भएको ग्रह बुध हो । कुनै पनि ग्रहले सूर्यलाई एक फन्को मार्ने समयावधिलाई एक वर्ष मान्ने गरिन्छ । कक्ष छोटो भएकोले गर्दा बुधले सूर्यलाई चाँडै परिक्रमा गर्नेगर्छ त्यसैले त्यहाँ वर्ष पनि चाँडो चाँडो आउँछ । हाम्रो पृथ्वीको दिनको आधारमा बुध ग्रहले सूर्यलाई ८८ दिनमा एक चक्कर लगाइसक्छ । अर्थात् बुध ग्रहमा ८८ पृथ्वी दिन बराबर १ वर्ष हुन आउँछ ।
फेरि सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने बुधको गति पनि निक्कै तीब्र छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार औसत रुपमा प्रतिघण्टा १०७,०८८ माइल (१७२,३४१ किलोमिटर)को गतिले बुधले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने गर्छ । सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने यो गति भनेको हाम्रो सौर्यमण्डलका अरु ग्रहहरुको गतिको तुलनामा सबैभन्दा छिटो हो ।
बुध ग्रह हाम्रो सौर्यमण्डलमा सबैभन्दा बढी क्रेटर (craters) भएको ग्रह हो । सौर्यमण्डलको निर्माण हुँदा सबै ग्रहहरुमा क्रेटरहरु थिए । वास्तवमा, सौर्यमण्डल बाल्यकाल वा युवाकालमा हुँदा यसमा थुप्रै स–साना उल्कापिण्डहरु (Meteoroids) हरु थिए र तिनीहरु ग्रहहरुको सतहमा गएर ठोक्किने गर्थे । तिनै उल्काहरु ठोक्किने क्रममा नै क्रेटरहरु बन्ने गर्थे ।
हामीलाई अचम्म लाग्न सक्छ– त्यसो हो भने त मंगल, शुक्र र पृथ्वीमा पनि थुप्रै क्रेटरहरु हुनुपर्ने ! तर किन छैन त ? यसको कारण चाहिँ यहाँ निरन्तर रुपमा चल्ने हावा हुरी, वर्षा, ज्वालामुखी लगायतका अरु विभिन्न शक्तिहरुका कारण भएका क्रेटरहरु पनि मासिएका हुन् । अरु ठूला ग्याँसले बनेको ग्रहहरु बृहस्पति, शनि, अरुण र बरुणमा पनि धेरै क्रेटरहरु नदेखिनुको कारण चाहिँ ती ग्रहहरु पृथ्वीबाट टाढा हुनु र त्यहाँको सतह मेटेरोइड ठोक्किएको देखिने ढंगले प्रष्ट नहुनु पनि हो । उता बुधमा चाहिँ वायुमण्डल अति पातलो छ । त्यहाँको वातावरण पनि स्थायी खालको छैन, जसले गर्दा मेटेरोइडहरु पनि त्यहाँ सजिलै र निक्कै ठोक्किने गर्छ । यही कारण नै बुधमा धेरै क्रेटरहरु देखिन्छन् ।
कति पुरानो ग्रह?
बुध ग्रह यही व्यक्तिले पत्ता लगाएका हुन् भनेर भन्न गाह्रो छ । वास्तवमा, बुध लगायतका पाँचवटा ग्रहहरुलाई निक्कै प्राचीनकालदेखि नै मानिसहरुले पहिचान गरिसकेका थिए । यी पाँच वटा ग्रहहरुलाई हेर्नको लागि टेलिस्कोप नै चाहिँदैन, मानिसको नांगो आँखाले नै पनि देख्न सकिन्छ ।
आजभन्दा हज्जारौं वर्षपहिलेदेखि नै पृथ्वीका विभिन्न भागका वासिन्दाहरुले बुध ग्रहलाई देखिसकेका थिए । आजभन्दा ईशापूर्व ३००० भन्दा पहिले नै पनि सुमेरियनहरुले यो ग्रह पत्ता लगाइसकेका थिए । सूर्यबाट सधैं नजिक रहने कारणले यो ग्रहलाई मानिसहरुले शुक्र, मंगल, वृहस्पति र शनि ग्रहपछि मात्र पत्ता लगाएका थिए भन्ने विश्वास गरिन्छ ।